Apple TV + ayaa la bilaabi doonaa Noofembar 1er oo leh taxane asal ah oo ah 8 - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Apple TV + ayaa la bilaabi doonaa Noofembar 1er oo leh taxane asal ah oo ah 8
Ka dib ogeysiisyada la xiriira aaladaha cusub ee Apple (iPhone, Apple Watch) iyo adeegga Apple Arcade, shirkadda Mareykanka waxay daaha ka qaadaysaa waxyaabaha xiisaha leh ee adeegyadeeda qulqulka ay ku abuurtay magacyo waaweyn oo ah farshaxanimada 7ème.
Apple waxay ku dhawaaqday taageere weyn cusbooneysiinta noocyadeeda kala duwan ee mobiladaiPhone 11, TheApple Watch Taxanaha 5, a nooc cusub iPad leh 10,2 inji iyo adeeg ciyaar Apple Arcade. Shirkadda California, si kastaba ha noqotee, waxay soo saartay xadhig kale qaanso qaanso yar oo buuq yar sameysay: Apple TV +. Dambe wuxuu soo bandhigi doonaa (yar) buugga taxanaha taxanaha marka uu bilaabmayo bisha Noofembar 1er, laakiin waa inuu si dhakhso leh u horumariyaa. Apple TV + waxaa laga bilaabi doonaa "in kabadan wadamada 100 iyo gobolada" waxaana laga heli doonaa barnaamijka Apple TV ee iPhone, iPad, Apple TV, iPod taabashada, Mac, iyo waliba aalado kale, oo ay kujirto tv.apple. com, oo loogu talagalay € 4,99 bishii oo leh maalmaha tijaabada bilaashka ah ee 7.
Hal sano ayaa la siiyaa iibsashada alaabada Apple
Si looga dhaadhiciyo dhinacyadeeda oo loo qanciyo isticmaaleyaasheeda, Apple TV + waxaa heli doona dhammaan macaamiisha iibsatay iPhone, iPad, Apple TV, iPod taabashada ama Mac. Waa suurta gal in lala wadaago isla diiwaangelinta dadka 6 dadka iyada oo loo marayo hawsha Wadaagga Qoyska. Macaamiilku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ku daawado asalka Apple TV + abuurka khadka tooska ah iyo khadka tooska ah, ayadoon la xayeysiin iyo baahi la raadin, iyadoo loo sii marayo barnaamijka Apple TV ee horay loogu sii rakibay astaamaha summada leh. Apple ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in furitaanka "saddexda qaybood ee ugu horreeya ee taxanaha Apple TV ay noqon doonaan kuwa khadka tooska ah ah, iyada oo ay ku xigto dhacdo cusub toddobaad kasta, halka taxanaha kale la heli doono si buuxda."
Waxyaabaha ku jira gambaleelka
Markii la bilaabayo 1er Noofambar, markaa waxaa suurtagal noqon doonta in la daawado taxane qaar si isku xigta, laakiin taasi waxay bixisaa Apple TV + heerkan? Taxanaha Eeg iyada oo Jason Momoa iyo Alfre Woodard ay sheegi doonaan sida, sanadaha 600 ilaa mustaqbalka halka fayrasku uu hoos u dhigay tirada dadka isla markaana uu indho tiray kuwa badbaaday, aadamigu waa inuu la qabsado oo uu helo habab cusub oo lagu badbaadiyo; Bandhigga Subaxa oo ay weheliyaan Reese Witherspoon, Jennifer Aniston iyo Steve Carell waxay sawirayaan caalamka oo dhan wararka ugu horeeya ee maalinta; Dickinson Hailee Steinfeld waa "majaajillo madoow oo ku saabsan u guurista qaangaarnimada" taas oo "qeexeysa caqabadaha bulshada, xaaladda haweenka iyo qoyska"; Dadka oo dhan Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) qiyaasi doonaa waxa dhici lahaa haddii orodka cirku uusan waligiis istaagin oo barnaamijka meelahayguna uu ku sii nagaado wadnaha dhaqanka Mareykanka.
Dadka waaweyn iyo kuwa da'da yar
Apple TV + waxaa sidoo kale loogu talagalay kii ugu yaraa waxaana lagu bilaabi doonaa taxane heersare ah: Helpsters waa taxane cusub oo carruurta ah oo ka yimid hal-abuurayaasha 1 Sesame Street (Soodiinka Waddada) muujinta Cody iyo koox faraxsan oo ka mid ah bahallada jecel jecel xallinta dhibaatooyinka; Ku qiiq meel bannaan, wuxuu u sheegayaa halkudhigyada Snoopy inuu noqdo cir-astro; Sirta qalinku sheegi doonaa sida afar dhalinyaro ah, oo ay dib ugu midoobeen jinniyo qarsoon oo ka baqaya dukaanka dukaanka xaafada, inay si wada jir ah u sii daayaan jilayaasha suugaanta.
Dukumiintiyada dhammaan dhadhanka
Markay bilaabaneyso Noofembar 1er, buugga ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa filim dokumentiyo ah Boqoradda Maroodiga oo raacaya awoowe iyo adhigeedii markay guuritaankooda iyo taariikhdii ay Oprah Winfrey kala hadashay qorayaasha ugu waaweyn ee maanta. Wax yar ka dib bilaabista, waxyaabo kale ayaa la bilaabi doonaa, oo ay ku jiraan kan wax ku iibsashada maskaxda adeegaya Mr. Night Shyamalan iyo filimka muuqaalka leh Run Sheeg oo ay weheliso Octavia Spencer iyo Aaron Paul.
Barnaamijka 'Twitch' ayaa ugu dambeyntii ku imanaya Apple TV, oo ku jira beta
Apple TV +: sida codsiyada kale, soo dejinta nuxurka ayaa xaddidan
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/apple-tv-sera-lance-le-1er-novembre-avec-8-series-originales-327070
Oo halkan waa Apple Watch Series 5